Hireen Uummata Oromoo Gantuu fi Galtuun Hin Murtaa’u! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsHireen Uummata Oromoo Gantuu fi Galtuun Hin Murtaa’u!
Damee Boruu tin, Adoolessa 6, 2018
Uummatni Oromoo hiree isaa ofii murteefachuuf, humna, dandeettii, beekumsaa, dammaqinsa, murannoo fi dhaabbii akka sibiilaa jabaatu akka qabu waan hundaa dura hubatamuun barbaachisaa dha. Warri kaleesa ergamoota TPLF tahee ilmaan Oromoo lafa irraa haxxaa’aa ture qabsoo bilisumm Uummatni Oromoo dhiigaa isaa asiin gahe harkaa butanii Abbaa Qabsoo Bilisummaa Oromoo of gochuuf xibaaraa jiru. Uummatni Oromoo eessa akka turan, maal hojjechaa akka bahan erga qabsoon Uummata Oromoo as isaan baase immoo maal akka gochaa jiran bareechee waan isaan beekuuf waa’ee isaanii irratti yaroo balleessuun barbaachisaa miti.
Hiree isaa Uummata Oromoo harka gantuu fi galtuu irraa eegachaa hin jiru. Uummatni Oromoo tokkummaan ka’ee humna Wayyaanee kan jilbeefachiise humnaa waangota OPDO of keessa haxxoofnee baasuuf yaroo dheeraa fi wareegama amma yoonaa baafne baasuu nu hin barbaachisu. Warri gantuu fi galtuun kun guyyaa guyyaa afaan mi’eefatanii waa’ee uummataa dubbachuu dukkana keessa miila gooftaa isaanii jala gangalataa bulu. Namoota akka isaanii dhiiga uummata isaaniin jireenya mataa isaanii adamsaa jiran irraa kan hafee namni hojii isaanii kana hin hubanne yoo jiraate isa du’ee awwalame qofa. Ayyaan ilaallatoonni dantaa mataa isaniif jiraatan haqa saba isaaniif dhaabbachuu miti oduu isaa iyyuu dhaga’uu hin barbaadan.
Kana dura TPLF karaa OPDO dabballewwan kummaatamaan biyya ambaa keessa karaa scholarship fi maqaa baqataan facaaftee akka qabsoo uummata Oromoo dhabsiisanii fi ABO diigan tooftaa jabaan qindeessite nu irratti bobaaftee akk jirtu saaxiluuf yaalaa turuun keenya ni yaadatama. Haawaasni Oroomoo, Waldaan amaantii fi ijaarsi Oromoo ABO dabalatee akka gargar faca’u gochuudhaan gahaa guddaa raawwataa turan. Kunoo har’a OPDON waan facaasaa turte haamachaa jirti. Ayyan ilaalattonni kun of iyyuu of saaxilanii koomee irra wal ejjechaa gala jiru.
Galuu isaanii caalaa biyyi jijjiramee. Uummata keenyaaf darbee jira jedhanii maqaa Uummata Oromoon kijiba afuufaa jiru. Nuyis gallee uummata keenya karaa oomishaa gargaruu qabna jedhanii mootummaa Uummata Oromoo ficisiisuuf xiyyeefatee jiruuf propaganda ykn olola ofuun eenyummaa isaanii caalaa akka hubannu nu godhaa jiru. Waan haala qabtamaa ijaan agarrur ilmaan Orommo har’as adamsamaa, hidhamaa, ajjeessamaa fi Oromiyaa bakka mara keessatti waraana ifatti uummata keenya irratti labsame jiru dha.
Uummata Oromoo irraa guyyaa tokko miti sekondii (second) tokkoof ajjechaan irraa hin dhaabbatee hin beeku. Boorana, Gujii, Baatee, Asoosaa fi Harargee keessatti ajjechaan deemaa jiru warra Ormoo jaalana jedhee guyyaa guutuu kakkachaa oolan hooggantoota OPDO haaraa kanan kan qinda’ee tahuu Uummatni Oromoo mamii qabaachuu hin danda’u. Ilmaan Orommo bakka maratti lubbuun isaanii akka baala mukaraa yaroo harca’aa jiru maaliif isaan hin mararu? Waan hundaa caalaa waan mar’imaan namaa nyaatuu wal irraa utuu hin citiin haammeenya Uummata Oromoo Harargee keessa jiraatu irra gahaa jiru dha. Cubbuun uummata kana irratti raawwataamaa jiru namoota har’a aanggoo biyyaa Oromoo bushuu qabana jedhan miti dhala dhala isaanii darbiin kan gubu dha. Cubbuu aaraaraa fi dhiifatama hin qabnetu rawwatamaa jira.
Muumichi Ministeeraa EPRDF akkuma humna darbataa ibidda (fire brigade) rakkina argame dhaamsuu yaroo rakkinni Impaayeera Itoophiyaa sana keessatti gahuu utaalee dhaqa’ee ibidda sana yaroof dhaamsuuf akka yaalaa jiru aggarra. Yoo naannoo Oromiyaa keessa tahe garuu barbaac hisaa miti. Waan ofii qindeessanii Uummata Orommo jilbeefachiisaanii karaa barbaadan irraa oofuuf qopheessaniif rakkina isaa hiikuu miti fakkeessuuf illee hin rakkatan. Abadan hooggantoonni OPDO kun yoo sammuu qabatan waan tokko isaan yaadachiisuu barbaada. Uummatni Oromoo lammaffaa gantuu fi galtuuf miti humna biyya lafaa irratti jabaa taheef (super power) iyyuu hin jilbeefatu. Kan isiin baasu uummata keessan wajjin dhaabbatanii seenaa tolchuu qofa. Kana booda Uummata Oromoo tufachuun, gowwosuu fi morma isaa michirtanii akka karaa bilisummaa irraa gufatuu gochuuf yaroon isinitti darbee jira.
Uummatni Oromoo Kabaa amma Kibbaa, Dhihaa amma Bahaa kaanee waliif dirmachuu qabna. Uummatni Oromoo Haragee keessa jiraatu guyya guyyaan manni dhaa’imaa fi beelada wajjin irratti gubbachaa jira. Qabeenyi uummataa barbadaa’aa fi horiin isaa saamamaa jira. Lola irratti baname kanaan utuu wal irraa hin citiin namni du’uu fi madaa’uu lakkobsa hin qabu. Uummatni keenya biyyoo walitti deebisee wal owwaaluufuu dadhabaa jira. Maaliif teenyee Mootummaa sanyii Uummata Oromoo dugugee balleessa jiru kana ilaalla? Waraanni daangaa Oromoo irratti deemaa jiru gara Oromiyaa jidduu galeessas ni dhufa. Yoo waraanni amma qe’ee keeny adhufu kan eegnu tahee kunoo kaleessa Naqamteen gaheera jedhu.
Karaan bilisuummaa tokkicha. Lama hin jiru. Bilisuummaan kadhaan ykn mariin hin argamu. Bilisummaa keenya Qabsoo Fincila Xumura Garbummaa jabeessuudhan WBO fi QBO irree tokkummaan dhaabbannee diina keenya barbadeessine dhiiga keenyaan arganna.
Barreffamni kun eenyuun balaaleffachaa akka jiru hinbeekamu;yoo dandaa’ame ebelu jechuu dha. maqaa namadhuunfaas maqaa dhaaba wayis tuqee haala qabatamaa amma jiru wajjin walqabsiisee ragaadhan waan hojjetame yoo hintuqne gatii hinqabu. Siyaasa dulloomaa dhiisnee bara wajjin utuu deemne. Ammas akka kaleessaa carraan dhufaa jiru akka nurraa hinbutamne haadammaqnu. Quba nama/qaama biraatti qabuu haadhisnu;of haalaallu!